Matipi: Nyanzvi Pindura Mibvunzo Yakakosha Nezve COVID-19 | Lantian Bishui
Matipi: Nyanzvi Pindura Mibvunzo Yakakosha Nezve COVID-19
Nei Xinfadi musika wekutengesa uchifungidzirwa kuti ndiwo wakakonzera kuitika kweCOVID-19 muBeijing?
Kazhinji, iyo yakadzika tembiricha, hutachiona hwakareba hunogona kurarama. Mumisika yekutengesa yakawanda zvakadaro, hove dzinochengetwa dzakagwamba nechando, zvichiita kuti hutachiona hurambe huripo kwenguva yakareba, zvichikonzera mikana yakawedzerwa yekutapurirana kuvanhu. Pamusoro pezvo, huwandu hwakawanda hwevanhu hunopinda nekubuda munzvimbo dzakadai, uye munhu mumwe chete achipinda aine hutachiona hwekona anogona kukonzera kupararira kweutachiona munzvimbo idzi. Sezvo zvese zviitiko zvakasimbiswa mukuputika uku zvichionekwa kuti zvakabatana nemusika, kutarisirwa kwakapihwa kumusika.
Ndeipi sosi yekuendesa hutachiona mumusika? Ndevanhu here, zvekudya zvakaita senyama, hove kana zvimwe zvinhu zvinotengeswa mumusika?
Wu: Zvakaoma kwazvo kupedzisa chaiko sosi yekutapurirana. Hatigone kufunga kuti salmoni inotengeswa mumusika ndiyo sosi yakangotsvakirwa nekutsvaga kuti mabhodhi ekucheka salmoni mumusika akaedzwa aine hutachiona. Panogona kuve nemimwe mikana yakadai sekuti muridzi mumwe webhodhi rekucheka akatapukirwa, kana chimwe chikafu chinotengeswa nemuridzi webhodhi rekucheka chakachisvibisa. Kana mutengi anobva kune mamwe maguta akakonzera hutachiona 'kupararira mumusika. Kuyerera kwevanhu mumusika kwaive kukuru, uye zvinhu zvakawanda zvakatengeswa. Izvo hazvisi izvo chaiko sosi yekufambisa ichawanikwa munguva pfupi.
Kusati kwatanga, Beijing yakanga yataura kuti hapana nyowani dzemunharaunda dzinopfuudzwa COVID-19 kweanopfuura mazuva makumi mashanu, uye hutachiona hwekorona haufanire kunge hwakatanga mumusika. Kana zvikasimbiswa mushure mekuferefetwa kuti hapana imwe yezviitiko zvitsva zvevanhu vakaongorora hutachiona hwakatapukirwa muBeijing, saka zvingangoita kuti hutachiona hwakaunzwa muBeijing kubva mhiri kwemakungwa kana dzimwe nzvimbo muChina kuburikidza nezvinhu zvakasvibiswa.
Post nguva: Jun-15-2020
Hot Zvigadzirwa, Sitemap, Screen Inopukuta Imwe Yakaputirwa, Sunscreen Wipes, Best Lens Wipes, Lens Kuchenesa Tissue,